Shina: ‘menaka maloto’ mameno ireo toeram-pisakafoanana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Avrily 2019 3:15 GMT
Nilaza ny tatitra avy amin'ny Chongqing Evening Post fa ahitana aflatoxines, singa mahatonga homamiadana mahazatra ao anaty bobongolo ary voalaza fa mahafaty in-100 avo heny noho ny arsenika (akora misy poizina) ny menaka.
Manomboka amin'ny fanangonana ireo ambina menaka avy amin'ny lakan-drano maloto sy ny fakon'ireo hôtely sy ny trano fisakafoanana ny famokarana menaka maloto, araka ny filazan'ny Baidu Encyclopedia. Diovina ho menaka azo hanina ilay singa ary avy eo amidy indray any amin'ny indostria, matetika tonga any amin'ny trano fisakafoanana any an-tsekoly sy eny amin'ny toeram-pisakafonana madinika.
Tsy zava-baovao ny fampiasàna miely patrana an'ilay menaka, hoy ilay bilaogera Zizuo-Congming nanoratra. Mampiseho ny fihetsik'i Shina minitra farany manoloana ny olana goavana ara-pahasalamana ny fampahalalam-baovao vao haingana momba ny loza ara-pahasalamana aterak'izany.
Mampiseho ny maha-goavana ny olana eo amin'ny indostrian'ny sakafo ao Shina ny fitantarana betsaka ataon'ny fampahalalam-baovao, hoy ilay bilaogera Xingyu-liushui nanoratra. Saingy mety hiteraka fahazarana tsara kokoa ara-pihinanana ny fanairana.